Foreign Trade Tops $3.1 Billion in One Month | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinanceForeign Trade Tops $3.1 Billion in One Month
Foreign Trade Tops $3.1 Billion in One Month
Myanmar’s foreign trade exceeded $3.1 billion in the first month of the 2020 fiscal year, an increase of $417 million over the same period last year, according to Ministry of Commerce data.
The country exported over $1.5 billion worth of goods and imported $1.6 billion worth of products during October. According to the Ministry of Commerce, the country exported seven main products led by industrial and mining products, which accounted for over $735 million and $399.4 million, respectively.
Exports of agricultural products generated over $264 million while animal products earned over $20 million, fishery products $93.1 million and other products $51 million.
The total export value grew by $357 million over the same period last year.
The country imported $577.6 million worth of investment materials, $531.4 million worth of industrial-use products, $301.1 million worth of consumer products, and $208.4 million worth of raw materials for CMP (cut-make-pack) businesses.
The country’s biggest trade partner is China, which accounted for $34.9 billion in trade volume in the 2019 fiscal year.
လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်အစတစ်လတာအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော်ကုန်သွယ်ထား
လက်ရှိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမလအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော် ကုန်သွယ်ထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
လက်ရှိ ကုန်သွယ်ထားသည့် ပမာဏနှင့် ပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူတွင် ကုန်သွယ်ထားသည့်ပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၇ သန်းကျော် ပိုမိုရရှိထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ထားပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြန်လည်တင်သွင်းထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တစ်လတာကုန်သွယ်မှုစာရင်းများအရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပို့ကုန် (၇)မျိုးအဓိကတင်ပို့ပြီး ချုပ်ပြီးအထည်ပါဝင်သည့် စက်မှုကုန်ချောကဏ္ဍနှင့် သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်မှုစာရင်းများအရ သိရသည်။
ပြည်ပသို့ တင်ပို့မှုအများဆုံးပို့ကုန်ဖြစ်သည့် စက်မှုကုန်ချောတင်ပို့မှုမှာ တစ်လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃၅ သန်းကျော်နှင့် သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉၉ ဒသမ ၄ သန်းအထိ တင်ပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ကျန်ပို့ကုန်များဖြစ်သည့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၄ သန်းကျော်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ကျော် ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၁ သန်းတန်ဖိုးရှိသည့် ပို့ကုန်များ တင်ပို့ထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကုန်သွယ်ရေးစာရင်းများအရ သိရသည်။
လက်ရှိတင်ပို့ထားသည့် ပို့ကုန်ပမာဏနှင့် ပြီးခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူတွင် တင်ပို့ထားသည့် ပို့ကုန်ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၇ သန်းကျော်ဖိုး ပိုမိုနေကြောင်း ပို့ကုန်စာရင်းများအရ သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇၇ ဒသမ ၆ သန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃၁ ဒသမ ၄ သန်း၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၁ ဒသမ ၁ သန်းကျော်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမှု (CMP) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၈ ဒသမ ၄ သန်းအထိ တင်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်လုံးတွင် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကျော်ဖိုးကုန်သွယ်ခဲ့ပြီး အများဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
Vol7Issue 46
Previous articleStocks Climb, Investors Seek Enlightenment from Trump On Trade
Next articleKorea’s Posco and U.S. Firm McDermott Sign Deal for Gas Project